April 8, 2021 - Achawlaymyar
အေမကို ခ်စ္တဲ့သူတိုင္း ဖတ္ၾကည့္ပါ (မ်က္ရည္ခိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္)
April 8, 2021 by Achawlaymyar
” မ်က္ရည္ခိုင္မွဖတ္ပါ ” ” နင့္မွာ ဘာေစာက္လုပ္ ရွိလို႔လဲ့ ပိုက္ဆံေတြ အရမ္းသုံးျဖဳန္း ေနရတာ့ ” “ဟာ့ အေမကလည္း ကြၽႏ္ုပ္ဆိုရင္ အၿမဲအေကာင္းမျမင္ဘူး့ ” ” ဟဲ့ မသေကာင္ ငါ ေျပာတာ ဘာမွားလို႔လဲေသခ်င္စိုးေလရဲ႕ ” ” အေမ သားကိုဘဲ ဆဲေနတာပဲ့ ေတာ္ၿပီဗ်ာ့ အေမ့ကို မႏွိပ္ေပးေတာ့ဘူး ” ” မႏွိပ္ေပးလည္း ေန႔ ႂကြႂကြ !!”ဘူးသီးေၾကာ္ေရာင္းေသာ အေမက စိတ္တိုတိုျဖင့္ေျပာလိုက္သည္ ။ ေနာက္တစ္ေန႔မွ မိုး အရမ္းခ်ဳပ္လို႔ သားက အိမ္ျပန္မလာ” ဘယ္ေတြ ေလွ်ာက္သြားေနတာလဲ မသိဘူးဒီေကာင္စုတ္ေလး့ “မေအ က စိတ္ပူေနတာေပါ့ ။ကို သံေခ်ာင္းက စာလာပို႔ သည္ ။ … Read more
လြန္​ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကျပည္သူ​မ်ားရဲ႕ႏွလံုးသားအား သိမ္းပိုက္သြားခဲ့​တဲ့ (CNN)သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ ​Clarissa Ward ရဲ႕အေၾကာင္း
ဒီရက္ပိုင္း ျပည္သူ​ေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကို သိမ္းပိုက္သြားတဲ့ (CNN)သတင္းေထာက္Clarissa Wardအေၾကာင္း။ Clarissa Ward (CNN)အသက္ ၄၁ႏွစ္ဟာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာေမြးၿပီး နယူးေယာက္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ကာ ယူေကေက်ာင္းကေန အေမရိကန္ရွိ ေယးလ္တကၠသိုလ္သို႔တက္‌​ေရာက္ခဲ့တယ္။ သူဟာ ၁ႏွစ္နဲ႔ ၃ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလး၂ေယာက္ရဲ႕မိခင္ျဖစ္ပီး ဘာသာစကားအေနနဲ႔ ျပင္သစ္၊ အီတလီ ရွရွား၊ အာရတ္ဗီးယား၊စပိန္နဲ႔ တ႐ု.တ္ဘာသာစကား (Mandarin)ကို အေျခခံေျပာနိုင္တဲ့သူတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃မွာ Fox Newsတြင္အလုပ္စဝင္ခဲ့ပီး ABC News, CBS News နဲ႔ ခုေနာက္ဆုံး လန္ဒန္အေျခစိုက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္အျဖစ္ CNNမွာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္မွ ယခုအထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ သူက ဆီးရီးယားအ‌ေရးတုန္းက နိုင္ငံတြင္းမွ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာသတင္းပို႔ခဲ့ၿပီး ​ေ.သန.တ္မ်ားႏွင့္ဗ.ံုးမ်ား၊ ထ.ိုးႏ.ွက္ခ်က္မ်ားၾကားက ဂ.်ီဟတ္ဝ.ါဒ.ီတစ္ဦးအား ကာကြယ္ေပးဖူးခဲ့တယ္တဲ့။ သူမဟာ ယီမင္၊ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ​ေဖာ္ျပနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ … Read more
ဆိုးလ်မြို့က ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ပေးတော့မယ့် တောင်ကိုရီးယား
ဆိုးလ်မြို့က ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ပေးတော့မယ့် တောင်ကိုရီးယား အခု တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ်မြို့ကကျောင်းတွေမှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ပေးတော့မယ်တဲ့။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်မြန်မာစ.စ်တ.ပ်ရဲ့အ.ာဏ.ာသိ.မ်းမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းကို ဆွေးနွေးမယ့်အခွင့်အလမ်းပညာရေးပါ။ အခု အခွင့်အလမ်းပညာရေးကို ပုံမှန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ မဖော်ပြထားပေမယ့်လည်း လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုသင်ကြားပေးမယ့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သင်ကြားပေးမယ့်ခေါင်းစဉ် ၅ခုရှိမှာပါ- ၁.မြန်မာနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ဆက်သွယ်မှု၊ ၂.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဲရင့်သောနိုင်ငံသားများ ၃.နေ့စဉ်ဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ၄. မြန်မာနိုင်ငံမှငြိမ်းချမ်းရေး၊ ၅. မြန်မာ-ကိုရီးယား သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖလှယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါဝင်မှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေကို မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ကြားပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အခု အခွင့်အလမ်းပညာရေးကတဆင့် ကျောင်းသားလေးတွေ ရင့်ကျက်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာစေဖို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အသိပညာကိုရရှိစေချင်လို့ပါတဲ့။ ကျေးဇူးပါ ယောက္ခမမြေရေ။ … Read more
လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ Folic Acid လျော့နည်းခြင်းရဲ့သတိပြုဖွယ်လက္ခဏာများ
လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ Folic Acid လျော့နည်းခြင်းရဲ့သတိပြုဖွယ်လက္ခဏာများ အမေရိကန် ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို folic acid 400 micrograms ပြည့်အောင်စားသုံးပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Folate လို့လည်းခေါ်တဲ့ ဗီတာမင် B9 ဟာ DNA အသစ်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သွေးနီဥတွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ folate ဓာတ်နည်းနေပြီဆိုရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အတွင်းကလီစာတွေကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် အထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ (၁) အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း Folic acid ဟာ သင့်ရဲ့ အာရုံကြောအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ Folic acid လျော့နည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကျရောဂါ၊ သတိမေ့ရောဂါ၊ အာရုံစူးစိုက်လို့မရခြင်းနဲ့ … Read more
Categories က်မၼာေရး ဗဟုသုတ
မကြာခဏလက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့စ်လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုတာဖတ်ကြည့်ပြီးမျှဝေပါ
မကြာခဏလက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့စ်လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုတာဖတ်ကြည့်ပြီးမျှဝေပါ လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါ လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူး သူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွား ပါနဲ့အရေးကြီးလို့ပါလက်ဆစ်တွေချိုးဖူးသူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့ အရေးကြီးလို့ပါ သင်လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးပါသလား အရေးကြီး တယ်နော် ။ လက်ဆစ်ချိုးတာက လက်ကို ထိခိုက် စေနိုင်ကြောင်း ပြောစမှတ် တစ်ခု ရှိပါတယ် လက်ဆစ်ချိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့ အသံက သင့်အတွက် ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေပါ သလား။ အဆစ်အမြစ် တွေဟာ လက်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့ အခါ အရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပွတ်တိုက်မှု လျှော့နည်း စေတဲ့အရည် တစ်မျိုး synovial fluid ရှိရာ နေရာ … Read more
ချိုင်းချွေးနံကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ
ချိုင်းချွေးနံကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ လူတစ်ယောက်မှာ အနံ့ထွက်လာပြီဆိုရင် အနံ့အရင်ဆုံးထွက်တာက ချိုင်းကြားကနေ စတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင်းကြားမှထွက်တဲ့ ချွေးနံ့ကြောင့် လူအများရဲ့ ရှောင်ဖယ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အတော်လေးကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချိုင်းချွေးနံထွက်ခြင်းကိုသက်သာစေမယ့် အချက်လေးတွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ ၁။ ပန်းသီးရှာလကာရည် ပန်းသီးရှာလကာရည်က ပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်သလို အနံ့အသက်တွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို ရေနဲ့ သင့်သလိုရောစပ်ပြီး ချိုင်းကြားတွေကိုဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ နေ့စဉ်ရေချိုးပေးဖို့ လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေကိုလည်း သူများနဲ့ရောပြီးမဝတ်သင့်ပါဘူး။ ၂။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ သံပုရာရည် မုန့်ဖုန်ဆိုဒါကအနံ့အသက်တွေကိုလည်း ကင်းဝေးစေတဲ့အပြင် အညိုအမဲစွဲခြင်းတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ သံပုရာရည်ကိုရောမွှေပြီးတော့ ချိုင်းကြားကို ပွတ်လိမ်းပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် အညိုအမဲတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်သလို ရက်သတ္တပတ်လောက် … Read more
လူတိုင်း လူတိုင်း တစ်သက်တာမှာ (၈)နှစ်တစ်ခါကြုံရတဲ့ မရဏသက်ရောက်
လူတိုင်း လူတိုင်း တစ်သက်တာမှာ (၈)နှစ်တစ်ခါကြုံရတဲ့ မရဏသက်ရောက် လူတိုင်း တစ်သက်တာမှာ (၈)နှစ်တစ်ခါကြုံရတဲ့ မရဏသက်ရောက် မဟာဘုတ်(၂)ကြွင်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် မရဏသက်ရောက်များ.. တွက်စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရ် နဲ့ နေ့သားသမီး အသက်အပိုင်းအခြားကို အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ….. မြန်မာသက္ကရာဇ်ခုနှစ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ် ထဲမှ ( ၆၃၈ ) ဂဏန်း ကို နုတ် လိုက် လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ကို ရရှိပါသည် ။ အကယ်၍ ကိုယ့် မွေးရက် မွေးလ သည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ် ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန်း ကို နုတ် … Read more
မုန့်ဟင်းခါးချက်ကြမယ်နော် အရင်ဆုံးဘဲဥကိုပြုတ်ပြီး အခွံခွာ အစိတ်စိတ်လှီးထားပါ ငါး ငံပြာရည် ရေ စပါးလင်ထုထောင်းပြီး ပြုတ်ထားပါ ငါးအသားရပြီဆို အသားနွင်ထားပါ ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းစပါးလင်ဆနွင်း ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး ဆီများများထည့်ကာ ဆီသပ်ပါအနည်းငယ်ကြွပ်လာပြီဆိုမှ ငရုတ်စိမ်းမှုန့် နဲ့ ငါးထည့်ကာ ၅ မိနစ်ခန့် မွှေပြီးဆီသပ်ထားပါငရုတ်ကောင်းထောင်းထားပါ မွှေးတံဆိပ် မုန့်ဟင်းခါးမှုန့်တစ်ထုပ်ကိုရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နှံစပ်အောင် မွှေထားပေးပါ ငါးပြုတ်ရည် ကြက်သွန်ဥ ရေအနည်းငယ် ဘဲဥပြုပ် နဲ့ထန်းလျက်၃လုံးထည့်ပြီး ဆူပွက်လာသည်အထိတည်ပါ ဆူပွက်ပြီဆိုမှ ဖျော်ထားတဲ့မုန့်ဟင်းခါးရည်ထည့်ပြီး၅ မိနစ်ခန့်မွှေပေးပါ ငါးဆီသပ် ဆား ငရုတ်ကောင်းအချိုမှုန့်/ကြက်သားမှုန့် ဌက်ပျောအူ နဲ့စားနိုင်တဲ့ရေပမာဏ ထပ်ရောထည့်ပြီး ခပ်ကြာကြာလေးပွက်ပွက်ဆူအောင်ထားပေးပြီးရင် ရပါပြီ ။ကျွန်မက မုန့်ဟင်းခါးဆို ပျစ်ပျစ်ကြီးချက်တာမကြိုက်လို့ပဲထည့်မချက်ထားပေမဲ့ မွှေးမုန့်ဟင်းရည်မှုန့်နဲ့ချက်ထားတာဖြစ်လို့ အရောင်ကမဲမဲကြီးဖြစ်မနေပါဘူး ။ ငါးငံပြာရည်/တောငံပြာရည်အကောင်းစား သုံးပြီးချက်ပါရှင့် ဘာလို့ဆို မုန့်ဟင်းခါးအသက်ကငံပြာရည်ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ ။ ပဲနဲ့ချက်တဲ့မုန့်ဟင်းခါး Credit … Read more
အမြင်အာရုံ ကြည်လင်စေပြီး မျက်စိညောင်းညာမှုကို ပြေပျောက်စေမယ့် မျက်လုံး လေ့ကျင့်ခန်းများ By ဟယ်လ်သင် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း စတာတွေနဲ့ တနေ့တာပတ်လုံး အသုံးပြုနေရတဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ညောင်းညာနွမ်းနယ်လာတာမျိုးနဲ့ အမြင်အာရုံ မကြည်လင်တာမျိုး ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြပေးမယ့် မျက်လုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အမြင်အာရုံတွေကို ကြည်လင်စေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် မျက်လုံးညောင်းညာမှုတွေကိုပါ သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) မျက်လုံးကို ၅ စက္ကန့်လောက် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြူးနိုင်သလောက် ပြူးထားတဲ့ မျက်လုံံး လေ့ကျင့်ခန်းကို ၈ ကြိမ်ကနေ ၁၀ ကြိမ်လောက်အထိ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ မျက်လုံးကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတဲ့အပြင် သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပါ ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ (၂) လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကို ပူအောင် ခပ်ကြာကြာပွတ်ပေးပြီး မျက်လုံးတွေပေါ်မှာ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ဖိကပ်ပေးခြင်းဟာ ညောင်းညာနေတဲ့ … Read more